परिवर्तन चाहियो, तर अब को ? - नेपालबहस
परिवर्तन चाहियो, तर अब को ?
| १८:३४:१५ मा प्रकाशित
♦ यामप्रसाद शर्मा
सरकार एकपछि अर्को गर्दै दिनानुदिन ओरालो लागिरहेको छ । वर्तमान कोरोनाको माहामारीको संयोजन र व्यवस्थापनमा चुकी रहेको अवस्थामा दिनहुँ डरलाग्दा भ्रष्टाचारका समाचारमा अवतरित हुनु बाहेक अरु कहीँ कतै सरकारको छाँया समेत देख्न छाडियो, यो ज्यादै दुखद अवस्था हो । समग्र प्रशासन घुसखोरीको अड्डामा परिणत भएको छ ।
आम जनता वेरोजगारी, भुखमरीले अक्रान्त छन् तर सत्तासिनहरु आन्तरिक कलहको वाँसुरी बजाएर दोहोरि खेल्न मै मस्त छन् । विकासको गति ठप्पछ, वैदेसिक ऋणको आकार सगरमाथा जत्रो हुन लागिसक्यो । तर जसले सत्ताको स्वाद पाइरहेका छन् ति त् मस्त छन् नै जुठो पुरो हात लागि हुने जमात पनि तीन बित्ता उफ्रिन छाडेको छैन् ।
यी बाहेक राष्ट्रका ९० प्रतिशत जनता शोकाकुल छन् । आफ्नो र आफ्ना सन्तानको कहाली लाग्दो भविस्यको कल्पनाले त्रसित छन् । यत्रो विपद परेको बेला आँफुले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुको अकर्मन्यताले जनता विकल्पको खोजीमा नलाग्लान भन्न सकिन्न ।
तर को ?
सत्तासीनको घितलाग्दो हर्कतले गाईजात्रा विर्साइ रहेका छन् । सिद्धान्तहीन भडुवा जोक्करहरु नीति न नियमको अन्त्यहीन खेलमा मग्न छन् । कुनै एउटाको पत्तासाफ नभएसम्म यो खेलको अन्त्य हुने देखिदैन् । अब कुन पक्षले कुनलाई सक्ने हुन् कसरि सक्ने हुन् ? साथमा को को सकिने हुन् केहि निश्चित छैन ।
दुवै पक्षले मालिक मान्ने शक्ति उही नै हो अमेरिकन सीआईए भारतीय रअ अनि युरोपियन युनियन र चिनिया गुप्तचर संस्था । पाकिस्तानी आईएसआई र विभिन्न आतंकवादी संगठनको हल्ला पनि सुनिन्छ । तर यिनीहरु निर्णायक स्थितिमा नभएकोले यिनीहरुको चर्चा सतहमा आउदैन् ।
निरीह निमुखा जनताले सरकारबाट कही कतै कुनै प्रकारको राहत नपाएपछि छाया सरकारतिर आसे नजरले हेरिरहेका छन् । सायद यिनीहरु हाम्रा लागि केही बोलिदिन्छन् कि भनेर अथवा मै खाउँ मै लाउँमा डुवेको सत्तासीनलाई झक्झकाउने हिम्मत गर्छन कि भनेर तर वास्तविक सरकार भन्दा कम्तिको छाँया सरकार पो कहाँ छ र ?
आफ्नैसितको भारीले थिचिएको थिचिएको प्रतिपक्ष प्रमुखलाई कसरि महाधिवेशन आफ्नो पोल्टामा पार्ने खेल नै महत्वपूर्ण बनिरहेको छ । सत्ता पक्ष होस् कि प्रतिपक्ष होस् केवल आफ़्नै पोल्टो भर्ने छिर्के दाऊ मा व्यस्त छन् । नेता चाहे त्यो शीर्ष होस् या दोस्रो तेस्रो तहको नै किन नहोस अलि अलि बुद्धि विवेक भएकाहरुले नै तिनका झोले लफांगाहरुले डोहोर्याईरहेको वर्तमान अवस्थाको अन्त्य राजा आऊ देश बचाऊ नै किन बनाउन खोजिएको हो बुझ्न सकिएको छैन । के यो पनि विदेशीकै नेपाल योजनाको अंग हो ।
एक जना पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने देश हो भनेका थिए । पछिल्ला शृंखलाबद्ध घटनाक्रमहरु पनि विदेशीकै निर्देशनमा भईरहेका हुन् भन्नेमा शंका छैन् । विदेशीकै चलखेलले सरकारको चुनावी घोषणा पत्र पुरा गर्ने प्रतिबद्धता ? खै त् पार्टीका झोले लफंगाहरु बाहेक जनताले देख्ने महसुस गर्ने खालका क्रियाकलाप ?
विद्यालयमा दिइने सजायको स्वरूप बदलियो ४ मिनेट पहिले
बुन्डेसलिगामा बार्यन जित्दा हल्याण्डको डर्टमुण्ड पराजित ३२ मिनेट पहिले
नगरप्रमख थापासहित बैतडीका थप १८ जनामा कोरोना पुष्टि ५१ मिनेट पहिले
पुनःनिर्माणका अनुभव र सिकाइको अभिलेख राख्न वेविनारका सुझाव महत्वपूर्ण ५३ मिनेट पहिले
जर्बजस्ती करणीको अभियोगमा ६ जना कारागार चलान १४ घण्टा पहिले
इरानी परमाणु वैज्ञानिकको हत्यामा इजरायलको सम्लग्नता रहेको इरानको दावी, बदलाको चेतावनी ११ घण्टा पहिले
इथियोपियाली शरणार्थीलाई सहयोग गर्न सुडानलाई १५ करोड डलर आवश्यक ११ घण्टा पहिले
हिमाली क्षेत्रमा यस वर्ष आलु उत्पादन घट्यो २ दिन पहिले
भारतसँगको नाका खोल्न जनता समाजवादी पार्टीको माग ५ दिन पहिले
आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तत्कालका लागि स्थगित ४ दिन पहिले
चार गैँडा मरेकामा समितिको ध्यानाकर्षण ६ दिन पहिले
उपत्यकामा चाडबाडसँगै जोखिम बढ्दै, जनप्रतिनिधि चिन्तित ! ४ हप्ता पहिले
महोत्तरीमा स्थानीयको प्रदर्शनमा प्रहरीको हवाई फायर, ३ जना गम्भिर घाइते ५ दिन पहिले
काठमाडौं उपत्यकामा १६२२ जनालाई संक्रमण पुष्टि ४ हप्ता पहिले
कावासोती नगरपालिका एक हप्ताका लागि बन्द ३ हप्ता पहिले
नेपाल र बंगलादेशबीचको मैत्रीपूर्ण खेल लाईभ हुने ३ हप्ता पहिले
मुक्तिनाथ विकास बैंक १ लाख युरोसहित पुरस्कृत १ हप्ता पहिले
काठमाडौं नजिकै भूकम्पको धक्का ३ हप्ता पहिले
काठमाडौंमा बिहानैदेखि बर्खे झरी, एक–दुई स्थानमा ठूलो पानी पर्ने ! १ वर्ष पहिले
धरानमा उपचाररत संक्रमित पुरुषको मृत्यु २ महिना पहिले
नौबस्तामा पतिको कुटाइबाट एक महिलाको मृत्यु ८ महिना पहिले
ऊर्जामा खराब लगानी निषेध गर्ने तयारीमा सरकार ७ महिना पहिले